Moments leh saaxiibo 9
Saaxiibka ka yimid Gobolka Central ayaa waydiiyay: Miyay qalad tahay in la isticmaalo maskaxda halkii ay ka noqon lahayd habab jireed si loo daaweeyo qaladaadka jirka?
Su'aalku wuxuu daboolayaa beer aad u ballaaran si aan u qalmin jawaabta "haa" ama "maya". Waxaa jira xaalado mid ka mid ah loo aqoonsan karo isticmaalka awooda fikradda ah in laga guulaysto qaladaadka jirka, taas oo aan ku dhihi lahayn inaysan khalad ahayn. Inta badan kiisaska waxaa si khalad ah loo isticmaalaa in la isticmaalo maskaxda halkii ay jir ahaaneed jir ahaaneed si loo daaweeyo qaladaadka jirka. Sideen markaas u go'aansanaynaa tusaalooyinka ay sax yihiin iyo kuwa qaldan? Tan waxaa loo arki karaa oo keliya iyada oo la raacayo mabda'a ku lug leh. Haddii aan dareemno hubinta mabda'a macnaheedu waa shaqeynayaa waafaqsan yahay sidaas darteedna waa sax. Sidaa darteed su'aashu waxa laga jawaabi karaa qaab guud ahaaneed oo aan ahayn kiis gaar ah, haddii mabda'a loo arko in shakhsigu uu awood u leeyahay inuu ku dabaqo kiis gaar ah oo lagu go'aamiyo in ay sax tahay ama qalad tahay in lagu daaweeyo qaladaadka jirka hababka maskaxda. Aynu ogaanno mabda'a: Miyuu jiraa xaqiiqda dhabta ah, mise waa been-abuur? Haddii luminta jireed ay xaqiiq tahay waa inay noqdaan natiijada sababaha. Haddii laysku yiraahdo qaylo-dhafeedku waa khiyaamo, maaha mid qalqal ah oo dhan, waa feker. Haddii ereyga la sheego inuu yahay cudur maskaxda ah iyo in xanuunku uu jiro maskaxda oo aan jirka ku jirin jirka markaa ka baqdintu ma aha jirro jireed, waa madluun. Laakiin hadda maanu la qabsan karin miyir la'aanta; waxaan ka walaacsan nahay dhibaatooyinka jirka. U ogolow markaa khaladaadka jireed waa xaqiiqo, waxaan dhihi karnaa in xaqiiqooyinkani ay saameynayaan. Tallaabada xigta waa in la raadiyo sababaha saameyntaas. Haddii aan awoodno inaan helno sababo jirro jireed waxaanu awoodi doonnaa inaanu daaweyno xanuun jireed annaga oo ka qaadno sababtiisa iyo caawinta dabeecadda si loo hagaajiyo burburka. Xummadaha jidhka waxay noqon karaan natiijada jireed ama sababo maskaxeed. Cilladaha jireed ee keena habka jireed waa in lagu daaweeyaa hab jireed. Cilladaha maskaxda ee leh maskaxiyan, waa inay yeeshaan sababaha maskaxda ee jirradda laga saaro kadibna dabeecadda waa in loo oggolaadaa inay dib udhigto midnimada jidhka. Haddii horeyba uhesho mid sax ah, waxaanu hadda sheegi karnaa in jirro jireed oo leh cudur jirka ah in aan la daaweyn maskax ahaan, iyo in jirro jireed oo ka timaadda sababo maskaxeed ay tahay in sababaha laga saaro oo dabeecadda dib loo hagaajiyo jirro jireed. Dhibaatada soo socota ee laga saaro si loo ogaado qaabkayagu waa in la go'aamiyo waxa ay khaladka jirka u leeyihiin sababo muuqaal ahaaneed, iyo sida xun ee maskaxdu ay sabab u yihiin. Dhibaatooyinka, nabarrada, lafaha jajaban, murgacashada iyo wixii la mid ah, waxaa sababa xiriir toos ah oo lala yeesho jidhka oo waa in la helaa daaweyn jireed. Cudurrada sida isticmaalka, sonkorowga, gout, laf-dhabarka ataxia, oof-wareenka, xanuunka dyspepsia iyo cudurka cagaarshowga, ayaa keena cunto aan haboonayn iyo dayacaad jidhka ah. Kuwani waa in lagu daaweeyo habka saxda ah ee jidhka iyo adoo siinaya cunto caafimaad leh, taas oo ka saari doonta sababta ugu weyn ee jirrada jireed iyo u siineyso dabeecada fursad ay dib ugu soo celiso jirkeeda xaalad caafimaad leh. Dhibaatooyinka jireed ee ka dhashay natiijada maskaxda, sida dareen-celinta, iyo cudurrada keena isticmaalka daroogada, daroogada iyo khamriga, iyo cudurrada keena fekerka iyo falalka xunxun, waa in la daaweeyaa adigoo ka jaraya sababta cudurka, iyo ka caawinta dabeecadda si ay u soo celiso dheellitirka jidhka oo ay cunto ku habboon tahay, biyo saafi ah, hawo nadiif ah iyo iftiinka qorraxda. Inay kala duwanaansho udhacaan jilicsanaanta jidheed ee sababo jireed iyo sababo maskaxeed, oo muujinaya in kuwa sababo jireed ay tahay in lagu daaweeyo habdhaqan jireed, iyo in kuwa maskaxda ka jiraa ay tahay in maskaxda la saaro, waxaanu ka jawaabi Su'aasha ah inaysan dhicin in la isticmaalo maskaxda si loo daaweeyo qalqalaha jireed haddii ay jirradani jireed ay sabab u tahay sababo maskaxeed, iyada oo loo aqoonsado mid maskaxeed oo maskaxeed, iyo sida loo saaro, iyo haddii ujeedada daaweeye uu wanaagsan yahay.
Miyuu xaq u leeyahay in la isku dayo in lagu daaweeyo qaladaadka jirka ee daaweynta maskaxda?
Maya! Xaq ma aha inaad isku daydo inaad ku bogsato jibbaarada jidheed ee kale "daweyn maskaxeed", sababtoo ah mid ka mid ah wuxuu u keeni doonaa waxyeelo joogto ah marka loo eego fiicnaanta. Laakiin mid ayaa xaq u leh inuu isku dayo inuu ku bogsado dhib kasta oo qallafsan naftiisa, dadaalkuna wuxu la kulmi karaa natiijooyin faa'iido leh, oo uusan isku deyin inuu isku dayo inuu aaminsan yahay inuu jiran yahay.
Haddii ay xaq u leedahay in lagu daaweeyo qalqalaha jireed ee maskax ahaan, macneheedu waa maskaxda jireed waxay leedahay asal maskaxeed, maxay khalad ugu tahay aqoonyahan maskaxiyan ama masiixiyiin ah si uu u daaweeyo bukaanshada daaweynta maskaxda?
Waa khaldan sababtoo ah aqoonyahanno masiixiyiin ah iyo maskaxiyan ma yaqaanaan maskaxda ama sharciyada xukumaya oo xakamaynaya ficilka maskaxda; sababtoo ah inta badan kiisaska cilmi-nafsiga maskaxda, oo aan ogeyn sababaha maskaxda ee jirdilka jireed, oo inta badan diidaya jiritaanka jirrooyinka, isku dayga in uu wax-yeelo daaweynta maskaxda ku amraya maskaxda bukaanka ama soo jeedinta maskaxda bukaanka in uu ka sarreeyo jirradiisa ama in bukaanku uu yahay mid been abuur ah; Sidaa darteed, ma ogi sababaha ama saameynta wanaagsan ee maskaxdiisa maskaxda ku hayso bukaankeeda marka la eego bukaanka, gaar ahaan haddii jirro la iska indho tiray ama loo arko inuu yahay mid been abuur ah, xaq uma lihin daaweynta. Mar labaad, haddii uu ujeedadiisu ahayd mid la isku dayey in la daaweeyo bukaanka iyo natiijooyinka u muuqday in ay faa'iido leeyihiin, haddana daaweyntan oo kale waxay noqon kartaa qalad haddii cilmi-nafsiga maskaxdu uu aqbalo ama loo saxo lacagta daaweynta.
Maxay khalad u tahay saynisyahannada maskaxda in ay helaan lacag loogu talagalay daaweynta jirdilka ama maskaxda dhimirka inta ay dhakhaatiirtu ka qaadaan kharashka joogtada ah?
Waxay noqon lahayd mid aad u fiicnaan lahayd Dawladu inay bixiso ama dayactirto takhaatiirta dadka, hase yeeshee tani maaha sidaas dhakhtarka ayaa lagu caddeeyay in lacagta la weydiisto; sababtoo ah, marka ugu horeysa ee uu awood u yeesho awoodda maskaxeed ee geedi socodka maskaxda, halka uu aqoonsado qalqalaha jireed inuu noqdo xaqiiqo, oo uu ula dhaqmo hab shakhsi ahaaneed, oo loola dhaqmo habdhaqan jireed wuxuu xaq u leeyahay mushahar jirka ah Waa maaha sidaas marka laga hadlayo maskaxda ama aqoonyahan kale, sababtoo ah wuxuu ku andacoonayaa in lagu daaweeyo habka maskaxda, iyo lacagta waa inaysan ka welwelin maskaxda ee daaweynta cudurka, maadaama lacagta loo isticmaalay looguna isticmaalo ujeedooyin jidheed. Haddii, haddaba, jirada jireed loo yiraahdo been abuur, wuxuu xaq u lahayn in uu qaato lacag jireed oo loogu talagalay daaweynta wixii aan jirin; laakiin haddii uu qirto jirro jireed oo uu u bogsanayo hababka maskaxiyan uu wali xaq u yeelan doonin inuu helo lacag sababtoo ah faa'iidada la helay waa inuu ahaado nooc ka mid ah macaashka la siiyey, iyo faa'iidada ka timid maskaxda kaliya lacagta waa inay ahaataa qanacsanaanta ogaanshaha in faa'iidada la siiyey. Macaashka la helay waa in lagu helaa isla diyaarad la mid ah oo la siinayo faa'idada la siinayo.
Sababtoo ah maaha mid xaq u leh cilmi-nafsiga maskaxda si uu u helo lacag loogu talagalay daaweynta cudurka marka uu waqtigiisu dhammaanayo shaqadan, waana inuu haystaa lacag uu ku noolaado?
Sababtoo ah qofka lacagta qaata ma soo celin karo caafimaadka maskaxda oo mid maskaxda ka jiran leh halka maskaxaha maskaxeed ee maskaxeed ee maskax ahaaneed uu niyadjabinayo fikradda lacagta. Mid ka mid ah ma shaqeynayo nin xagjir ah, edeb darro iyo nacas ah inuu baro oo hagaajiyo anshaxa naftiisa ama carruurtiisa; oo mar dambe ma aha inuu shaqaaleysiiyo maskaxiyan ama masiixiyiin masiixi si uu u daaweeyo isaga ama saaxiibo marka maskaxda "mindhicirta" ay la socoto iyo jiran tahay microbob. Waa ku filan tahay in la yiraahdo bogsiiyaha maskaxda ayaa u bogsanaya jacaylka bogsiinta iyo ka faa'iideysiga ragga kale. Haddii tani run tahay, su'aashuna maaha inuu galo maskaxdiisa, wuxuu ku faani doonaa fikradda aqbalaadda lacagta; sababtoo ah fikirka lacagta iyo jacaylka qofka isku midka ah ma aha diyaarad isku mid ah oo ay ku kala duwan yihiin sifooyinkooda. Sidaa darteed, marka lacag lagu soo jeediyo lacag bixinta faa'iidooyinka la helay, bogsiiyaha ayaa diidi doona haddii uu ka bogsado oo keliya jacaylka uu u qabo saaxiibkiisa. Tani waa tijaabada dhabta ah ee bogsashada. Laakiin waxaa la waydiiyaa sida uu waqtigiisii ​​u shaqeyn lahaa shaqadiisa oo uu ku noolyahay lacag la'aan? Jawaabtu waa mid sahlan: Dabeecadu waxay u diyaarsantahay dhammaan kuwa runtii jecel iyo naftooda u huray si ay uga caawiyaan hawsheeda, laakiin waxaa lagu tijaabiyaa tijaabooyin badan kahor intaan la aqbalin oo la bixin. Mid ka mid ah shuruudaha dabeecadda looga baahan yahay wasiirkeeda iyo dhakhtarkeeda ayaa ah inuu maanka ku hayo, ama inuu maskaxdiisa ka xoroobo jacaylka faa'iido u leh naftiisa. Iyadoo lagu dhejinayo in uu bogsade noqon lahaa rabitaan dabiiciga ah ee loogu talagalay bani-aadmiga iyo rabitaankiisa si uu u caawiyo bogsashada maskaxda. Haddii uu leeyahay awood dabiici ah oo uu la kulmo guulo, bukaannadiisa dabiiciga ah ayaa jecel inay muujiyaan mahadnaq, oo ay u soo bandhigaan lacag, inkastoo uusan dalban. Haddii uu dalbado ama aqbalo arrintan markasta waxa uu caddaynayaa in uusan ahayn mid dabiici ah doorto; haddii uu marka hore diido in dabeecadu isku daydo mar kale, oo uu ogaado in uu u baahan yahay lacag, iyo marka lagu booriyo inuu qaato daruuri inta badan u muuqda inuu ku qasbi karo inuu sidaas sameeyo; iyo aqbalaadda lacagtu si kastaba ha ahaatee si fiican ujeedadiisa ay tahay inuu noqdo mid kale, waa habka ugu horreeya ee maskaxdiisa masruufka leh ee microbe-sida loo xaqiijiyay in uu yahay kiiska bogsashooyinka ugu guulaha badan. Xanuunada lacagtu waxay ku dhacdaa maskaxdeeda, cudurkuna wuxuu ku sii korayaa guushiisa, xitaa inkastoo uu u muuqdo inuu ka faa'iideysanayo bukaankiisa qayb ka mid ah dabeecaddiisa, wuxuu dhaawac u geysan doonaa qayb kale, xitaa haddii aan qarsoodi ahayn, cudurka maskaxda ka jiran oo uusan ku fashilmi karin inuu bukaankiisa ku takooro cuduradiisa. Waxay qaadan kartaa waqti dheer, laakiin jeermiska cudurkiisu wuxuu ku xidhan yahay maskaxda bukaanka, cudurkuna wuxuu ku burburin doonaa dhinacyada ugu nugul ee dabeecadooda. Sidaa daraadeed maahan mid ku haboon qofkii saameyn kara daaweynta joogtada ah si uu u helo lacag, sababtoo ah uusan si joogto ah u daaweyn karin haddii uu helo lacag, hase yeeshee natiijooyinka waxay ka muuqdaan dusha. Dhinaca kale, haddii uu rabo kaliya inuu ka faa'iidaysto kuwa kale halkii uu lacag ka samaysan lahaa bogsiinta markaas dabiiciga ayaa ku siin doona isaga. Haddii uusan ogeyn xaqiiqda uusan ahayn mid ka mid ah dhakhaatiirta dabiiciga ah -waxaa ah kaliya dhakhtar dukaan leh.
Sidee bay dabiicigu u siin kartaa qof runtii raba inuu faa'iido kale u yeesho, laakiin qofkee u lahaan waaya inuu taageerayo naftiisa?
Marka la sheego in dabeecadda ay bixinayso inaanan macnaheedu ahayn in ay lacag ku maydhanayso dhabta ama in hubaal la'aantu ay cuni doonaan isaga ama shimbiraha ay isaga quudinayaan. Waxaa jira muuqaal aan muuqan oo dabiiciga ah, waxaana jira koox u muuqata. Dabeecadu waxay qabataa shaqo dhab ah oo ku saabsan dhinaca maqan ee domainkeeda, laakiin natiijada hawsheeda waxay u muuqaneysaa dusha sare ee muuqaalka dunida. Maaha suurtagal in qof kasta uu noqdo bogsiiye, laakiin haddii mid ka mid ah dad badani ay dareemaan in uu haysto dabiiciga dabiiciga ah oo go'aan ka gaaraya inuu jeclaan lahaa inuu bogsoodo shaqadiisa noloshiisa, markaa ninkaas wuxuu qaban lahaa shaqadiisa si aan caadi aheyn. Dhamaan kiiskan oo kale wuxuu ogaanayaa in dhaqaalihiisu uusan u ogolaaneynin inuu waqtigiisii ​​u huro si uu u bogsiiyo haddii uusan lacag helin. Haddii uu aqbalo lacag dabeecadda ma aqbalin. Wuxuu ku dhici waayey imtixaanka ugu horeeya. Haddii uu diiday lacag iyo waqti go'an oo keliya si loo bogsiiyo marxaladdiisii ​​uu ogolaan lahaa, markaa haddii uu lahaa awoodda dabiiciga ah iyo waajibaadkiisa adduunka iyo qoyskiisa kama hortagin, wuxuu ku heli lahaa booskiisa nolosha si tartiib tartiib ah ayuu isbedelayaa. Iyada oo sii wata rabitaankiisa wakhti xaddidan si uu u shaqeeyo aadanaha, duruufihiisa iyo xiriirka aadanaha ayaa sii wadi doona isbeddelka ilaa uu ka helo meel sidan oo kale ah, maaliyad ahaan iyo si kale, si loogu ogolaado inuu waqtigiisa oo dhan siiyo shaqadiisa. Laakiin, dabcan, haddii uu fikradda maskaxda ku hayay in dabeecadaas ay sidaas darteed doonayso in ay u soo bandhigto isaga, taas oo aad u maleyneysa in ay u qalantay lahaa inuu shaqada. aqoontiisu waa inuu si tartiib tartiib ah u koraayo horumarkiisa. Tani waa xaqiiqooyinka, kuwaas oo lagu arki karo nolosha badan oo ka mid ah wasiirada dabiiciga ah. Laakiin si aad u aragto qaabsocodka dabeecadda ee horumarinta xaqiiqooyinka, waa in qofku awood u leeyahay inuu la shaqeeyo dabeecadda iyo inuu ilaaliyo shaqadeeda ka hooseysa shayada korkiisa.
Miyay khabiirada masiixiyiinta iyo maskaxdu aanay samayn wax fiican haddii ay saameyn ku yeeshaan daaweynta ay dhakhaatiirtu ku dhacaan?
Qofka eegaya natiijooyinka deg dega ah isagoo aan ogeyn mabda'a ku lug leh waxa uu dhihi lahaa, haa. Laakiin waxaan dhihi maya, maya! Maadaama uusan qofna wax saameyn ah ku yeelan kareynin iyadoon wax ciqaab ah lahayn haddii gurigiisa uu khaldan yahay iyo haddii uusan ogeyn mabda'a ku lug leh. Marka laga soo tago su'aasha lacagta, maskaxda ama kuwa kale ee bogaha ah waxay ku dhow yihiin gebi ahaanba bilawga hawlgalkooda meelo qaldan, oo aan ogeyn mabda'a ku lug leh hawlgallada maskaxda. Xaqiiqda ah in ay ku daaweeyaan cudurada qaarkood waxay cadeynayaan in aysan waxba ka ogeyn howlaha maskaxda, ayna caddeeyaan in aysan ku habooneyn isticmaalka magaca "saynisyahanka" ee ay sheeganayaan. Haddii ay muujin karaan in ay og yihiin sida maskaxdu u shaqeyso marka loo eego cudurrada qaarkood waxay maskax ahaan u qalmi lahaayeen inay daaweeyaan dadka kale, inkasta oo aanay noqon karin anshax xumo.
Maxay tahay shuruudaha noocee ah ee maskaxeed ee maskaxiyan maskaxiyan haysto?
Si aad maskaxda uqalantid si aad u daawato maskaxiyan mid kale waa inuu awood u yeesho inuu naftiisa isku dhejiyo ama uu dhibaato ka helo isaga oo u gudbiya oo xallinaya. Waa inuu awoodaa in uu daawado maskaxdiisa maskaxdiisa hababka fikirka inta lagu jiro xallinta dhibaatada, mana aha oo kaliya in la arko geeddi-socodka maskaxdu si cad oo ah sida dhaqdhaqaaqa shimbiraha oo buuxa duulimaad, ama rinjiyeynta sawir farshaxan , ama naqshadeynta qorshe by dhismaha, laakiin waa inuu sidoo kale waa inuu fahamsan yahay hababka maskaxdiisa xitaa sida uu dareemi doono oo ogaan lahaa dareemada shimbirta iyo sababta keentay duulimaadkeeda, oo dareemo dareemada artist ah oo ogaan ujeedada of sawirkiisa, iyo raacsan fikirka dhismaha iyo ogaan ujeedada uu design. Haddii uu awoodi karo inuu sidan sameeyo, maskaxdiisa ayaa awood u leh inuu u dhaqmo si caqligal ah oo maskaxdiisa kale. Hase yeeshee xaqiiqadani: Haddii uu sidaas sameyn karo, weligiis isku dayi maayo in uu daaweeyo nidaamyada maskaxeed ee jirdhiska jirka ee sababo jireed, mana waligiis waligiis isku dayi doono in uu daaweeyo qalada jireed ee "kuula macaamilaya maskaxda qof kale," sababta oo ah maya mid ka mid ah wuu bogsiin karaa qof kale maskaxda. Maskax kastaa waa inuu ahaado dhakhtarkiisa haddii ay tahay in la sameeyo daaweynta maskaxda. Dhamaan waxa uu sameyn karo wuxuu noqon lahaa inuu caddeeyo runta dabiiciga ah ee jirrada ee maskaxda ku haysa midka kale, oo muujiya asal ahaan jirrooyinka iyo qaabka ay daaweyntiisu u dhici karto. Tan waxaa lagu samayn karaa kelmado af iyo uma baahnid daaweyn maskaxeed ama marmarsiimo qarsoodi ah. Laakiin haddii runtu la arko waxa ay ku dhufaneysaa asalka dhabta ah ee maskaxiyan iyo masiixiyaanka labadaba maxaa yeelay waxay ka dhigaysaa aragtida labadaba.
Muxuu yahay awoodda uu qofku u raaco shaqadiisa ama hawlgallada maskaxda, iyo inuu si dhab ah u arko sababaha, ka-reebista sheegashada maskaxiyan iyo masiixiyiin?
Sheegashooyinka labada nooc ee "saynisyahanno" waxay ku jiraan qaab diidmada iyo caddaynta. Qaadashada booska macalimiinta iyo dhakhaatiirta waxay sheegaan awoodda ay u leeyihiin in ay baraan qarsoodiga adduunka ee fikirka sida sayniska. Waxay sheegaan wax aan jirin iyo arrin maskaxeed, ama waxay diidaan jiritaanka xumaan, cudur iyo dhimasho. Hase yeeshee, waxay isu haystaan ​​hogaamiyaasha adduunka ee fisikada si ay u caddeeyaan in arrintu aanay jirin, in aan jirin wax shar ah, oo aan jirin cudur, dhimasho, cudurku waa qalad, dhimasho been ah. Laakiin iyada oo aan jirin arrin, cudur iyo qalad, waxay ku noolaan karin maadaama ay sameeyaan iyagoo qaadanaya khidmadda daaweynta cudur aan jirin, mana ay samayn karaan kaniisado iyo dugsiyo qiimo leh si loo baro jiritaanka jirro la'aan, arrin iyo xumaan. Magaca sayniska, kuwaas oo saynisyahannadu ay kasbadeen oo ay codsadeen shuruucda la xaqiijin karo iyada oo la eegayo shuruudaha horay loo shaaciyey, waxay qaataan, ka dibna waxay diidaan sharciyadan. Waxay isdaba-qaadayaan, waxay been-abuuraan kuwa kale, oo waxay ku nool yihiin adduunyo-baqdin, abuuray naftooda. Awoodda lagu arko hawlaha maskaxeed, maskaxdooda maskaxda ka yimaada, sababtoo ah waxay muujineysaa kala-soocidda saameynta jidheed ee maskaxeed, sida ficilka nacaybka, cabsida, carada, ama rabitaanka. Awoodda aad u aragtid shaqada qofka maskaxda ku haya sidoo kale wuxuu keenaa fakarka uu ku baaro jirka qofkastaa oo kale marka laga reebo maskaxda, dhammaantoodna waxay caddaynayaan xaqiiqooyinka diyaarad kasta oo ficil ah iyo ficil maskaxda ah ee diyaarad kasta. Maskax ahaan horumar ayaa marnaba qiraya sheegashada astaamaha maskaxda ama masiixiyiinta sababta oo ah sheegashooyinkaas waxaa loo yaqaanaa inay qaldan yihiin, iyo haddii mid ka mid ah "aqoonyahannadooda" ay tahay inay awood u yeeshaan inay arkaan xaqiiqooyinka ku saabsan diyaarad kasta oo uusan sii ahaan karin " aqoon yahan "isla markaana isla markaa fiiri xaqiiqooyinka.
Maxay yihiin natiijooyinka aqbalaadda iyo dhaqanka barista ee cilmiga masiixiyiinta ama maskaxda?
Natiijooyinka, wakhti ahaan, waxay u muuqdaan inay faa'iido ugu badan yihiin kiisaska intooda badan, sababtoo ah caqabada abuuray waa mid cusub, noloshuna waxay noqon kartaa waqti iyo wakhti keliya. Hase yeeshee, waa in ay timaaddo jawaab celin kasta oo ka dhalatay, taas oo keeneysa natiijooyin fara badan. Barida iyo dhaqanka caqiidooyinkooda waxay ka mid yihiin dembiyada ugu xun ee aadka u xun ee ka dhanka ah aadanaha, maxaa yeelay waxay ku qasban yihiin in ay diidaan xaqiiqooyinka marka ay ku jiraan diyaarad kasta. Maskaxda lagu daaweeyaa waxaa loola jeedaa in aan la awoodin xaqiiqda farqiga ujeeda, iyo sida aan u qalmin si loo ogaado runta diyaaradda. Maskaxdu waxay noqotaa mid aan fiicneyn, oo aan la hubin, oo diidi doonta ama sheegi doonta wax kasta oo la sheego iyo horumarkiisa sidaas darteed la xiro, waxa laga yaabaa inay noqoto burbur.
Maxay yihiin dad badan oo maskaxiyaal ah oo barwaaqo ah oo mug leh haddii aysan saameyn karin daaweynta, iyo haddii aysan ahayn waxa ay isu muujinayaan, ma bukaankooda ma ogaan karaan xaqiiqda?
Dhamaan ciribtirayaasha looma sheegin khiyaamo caqli-gal ah. Qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in ay sameynayaan wax wanaagsan, inkastoo aysan si weyn u eegin ujeedooyinkooda. Dhibaatada caqliga leh ee guulaysta waa mid barwaaqo leh, sababtoo ah wuxuu isu soo dhaweeyay oo noqday addoon ka mid ah Ruuxa Weyn ee Dunida, iyo Ruuxa Dunida ayaa abaal marin siinaya. Inay waxtar ku sameeyaan daaweynta cidina garanaysa iyaga ama shaqadoodu diidi doonto. Laakiin habka iyo qaababka ay daaweyntu ku dhacdo, cagajuglayaasha laftoodu ma yaqaaniin. Dhakhaatiirta ayaa si aan dabiiciga ah looma fileynin inay isu muujin karaan iftiin aan loo dulqaadan karin bukaanka, laakiin dhammaan dadka buka ma arko bogsiiyaha iftiinka uu ku arki lahaa isaga. Haddii aan rumaysannay qaar ka mid ah bukaannada la daaweeyay dhakhaatiirta, kuwan waxaa lagu arki karaa iftiin aan fiicnayn. Mid ka mid ah su'aalaha ka soo baxa sida daaweynta bukaanka, waa waxa ah dhakhtar aan caqli-gal ahayn uu soo jeedin karo bukaankiisa marka bukaan-socodka uu xakameynayo maskaxda ama ugu yaraan si ku filan ula xiriirin inuu helo talooyinkiisa. Ma noqon doonto wax la yaab leh in la ogaado in ay jiraan kuwa daacad u ah xirfadaha maskaxda, maadaama ay jiraan ganacsi ama xirfad kasta. Fursada iyo jirrooyinka la siiyay nin aan hagaagsaneyn waa mid weyn, marka laga hadlayo maskaxiyan maskaxeed ama xakamayntu waa arrin sahlan oo saameyn ku leh maskaxda ku haysa bukaanka deeqsinimada leh oo ku qanacsan in ay ku adkaystaan ​​aqbalida aqbalaadda aqbalaadda lacag badan ama hadiyad, gaar ahaan marka Pa-tient wuxuu aaminsan yahay in uu ka faa'iideystay.
Miyuusan ahayn Ciise iyo qaar badan oo ka mid ah quduusiinta, miyuu jiraa miyir-beelka jidhka oo macnihiisu yahay maskaxeed iyo haddii ay sidaas tahay waxay khalad ahayd?
Waxaa la sheeganayaa, waxaana aaminsanahay suurtagalnimada iyo runta ah, in Ciise iyo dad badani ay daweyn jireen jidh-dilka maskaxeed, waxaanan haysan karnaa inaan sheegno in aysan khalad ahayn, haddii ay ogaadeen waxa ay sameynayaan. Ciise wuxuu ogyahay waxa uu ku shaqeynayay ee ku saabsan qaabka aan u shaki lahayn, oo kuwo badan oo ka mid ah quduusiinta waxaa sidoo kale lahaa aqoon badan iyo rabitaan wanaagsan oo loogu talagalay aadanaha, laakiin Ciise iyo quduusiinta wax lacag ah uma aysan helin. Marka su'aashan la soo aruuriyo kuwa raali ka ah shaqada dhakhaatiirtu mar walba ma joojiyaan inay ka fakaraan xaqiiqadan. Sida ka duwan Ciise iyo iyada oo aan la garanayn waxay u muuqanaysaa midkood Ciise ama xertiisa ama mid kasta oo ka mid ah quduusiinta in ay lacag badan ku soo booqdaan bukaan kasta, daawo ama daawo lahayn, ama laga qaado shan ilaa boqol illaa 100 oo cashar ah, casharrada , si loo baro xerta sida loo bogsiiyo. Sababtoo ah Ciise wuxuu bogsiiyay cillado badan oo aan shatiga u haynin si uu naftiisa ugu hagaajiyo ganacsiga maskaxda. Qof kasta oo doonaya inuu ku noolaado sida ugu dhow ee Ciise sida uu u awoodo, wuxuu xaq u yeelan doonaa inuu bogsado, laakiin wuxuu u bogsiin doonaa jacaylka saaxiibkiisa, oo aanu marnaba aqbalin mushahar. Ciise wuxuu ku bogsiiyey aqoon. Marka uu ku yiri "dembiyadiinna waa cafiyan yihiin," waxa kaliya ee macnaheedu yahay in dhibbanuhu uu bixiyay ganaaxii dembigiisa. Aqoonta Ciise wuxuu u adeegsaday aqoontiisa iyo awooddiisa si uu isaga u yareeyo dhibaatada dheeraadka ah, sidaas darteedna u shaqeynaya halkii uu ka hor iman lahaa sharciga. Ciise, ama qof kale oo aqoon leh, ma doonayno qof kasta oo isaga u yimid, laakiin kaliya kuwa uu ku daaweyn karo sharciga. Isaga, isaga oo aan hoos iman sharciga. Wuxuu ka sarreeyaa sharciga; oo isagoo kor dhagxanaya wuxuu arkay kuwa sharciga ku hoos jira oo dhan. Waxa laga yareeyn karaa jireed, mid maskaxeed, ama maskaxda. Caqabadaha anshax-xummada waxaa lagu daaweyn jiray isaga markii ay ku adkeysteen caqabadaha lagama maarmaanka u ah inay u arkaan in ay arkeen qaladkooda, iyo markii ay dhab ahaantii doonayeen inay wax ka qabtaan. Kuwaas oo ah dhibaatooyin maskaxeed oo laga soo qaaday maskaxda ayaa la daaweyn karaa oo kaliya markii dalabaadka dabeecadda la raacay, marka caadadooda dabeecaddooda la bedelay, iyo markay diyaar u yihiin inay qaataan mas'uuliyadaha shakhsiyadeed iyo inay gutaan shaqadooda shaqsi ahaaneed. Marka sidaasi u timid Ciise wuxuu isticmaalay aqoontiisa iyo awooddiisa si uu u yareeyo dhibaatada sii kordhaysa sababtoo ah waxay bixiyeen deynta si dabiiciga ah, ay toobad keeneen xumadooda, iyo dabeecadahooda gudaha waxay doonayeen inay qaataan oo fuliyaan waajibaadkooda. Ka dib markii uu iyaga daaweeyey wuxuu ku odhan lahaa: Tag, oo mar dambe ha dembaabin.
Haddii ay khalad tahay helitaanka lacag si loo daaweeyo qaladaadka jirka ee maskaxda, ama siinta 'sayniska sayniska,' miyuu sidoo kale khalad ahayn macalinka iskuulka si uu u helo lacag loogu talagalay ardayda ku jirta mid ka mid ah laamaha waxbarashada?
Waxaa jira isbarbardhig yar oo u dhexeeya macalinka ama bogaha ee maskaxda ama cilmiga sayniska iyo macallinka dugsiyada iskuulka. Meesha kaliya ee ay isku midka yihiin waxay la mid tahay in waxbarista labadaba ay tahay inay qabtaan maskaxda bukaanka ama ardayda. Haddii kale waxay ka duwan yihiin sheegashadooda, ujeedadooda, hababka iyo natiijooyinka. Ardayda dugsiyadu waxay baranayaan in tirooyinku leeyihiin qiimo gaar ah; in isku dhufashada tirooyinka qaarkood marwalba natiijo gaar ah, oo waligeed, xaalad kasta oo macalinku u sheegayo ardayga in saddex jeer afar jeer ay yihiin laba, ama laba jeer ayaa sameeya laba iyo toban. Marka ardaygu barto inuu ku dhufto, had iyo jeer wuxuu cadeeyn karaa runta ama been abuurka bayaan kale oo ku saabsan isku dhufashada tirooyinka. Dhacdadu maaha inuu bogsadaha awood u yeesho inuu bukaanka-bukaanka u sheego wax sax ah. Aqoonyahanadu waxay bartaan naxwaha iyo xisaabta ee ujeedada iyo ku-habboonaanta habka saxda ah iyo muujinta fudud ee fekerkiisa ee kuwa kale ee caqli-gal ah. Dhibaatada maskaxda ama cilmiga saynisyahanada maskaxiyan ma barto ardaygiisa sharciyo ama tusaalayaal si loo caddeeyo ama looga takhaluso bayaannada dadka kale, ama u diyaari fikradiisa u gaarka ah iyo in ay u muujiyaan si caqli leh dadka kale oo aan ka aaminsanayn, ama u oggolaan waxa uu aaminsan yahay iyo caddaynta inay u taagan yihiin mudnaanta ay u hayaan waxa ay mudan yihiin. Iskuulada wax barashada waxay u taagan yihiin ujeedada ardayga si ay u fahmaan xaqiiqada diyaaradda ee uu ku nool yahay, inuu noqdo mid faa'iido leh, iyo xubin caqli-beel ah oo bulshada ah. Cilmi-baadhaha "aqoonyahanka" ma cadeeyo ama muujiyo sheegashada "cilmi-baare" kale iyada oo loo marayo geeddi-socodkiisa, ama ardayga takhasuska ah wuxuu cadeeyaa runta sheegashada asaga ama macallin kale oo leh darajo kasta oo sax ah; laakiin ardayga dugsiyadu wuxuu caddayn karaa waxa uu barto inuu noqdo run ama been. Macallimiinta dugsiyadu maaha kuwo iska dhigaya inay ku bartaan daaweynta jirdilka jirka oo ay macnaheedu tahay maskaxiyan, laakiin "aqoonyahannadu" wuu qabanayaa, oo sidaas daraadeed fasalka isku mid maahan macalinka dugsiga. Macallinka dugsiyadu wuxuu tababbaraa maskaxda ardaygiisa si uu u fahmo waxyaabihii u muuqda dareennada, oo uu helayo lacagtiisa lacageed oo caddaynaya dareenka; laakiin aqoonyahanada maskaxda ama maskaxiyan ayaa maskaxda ku haya maskaxda bukaanka-ardayga si ay uga hor tagaan, diidaan, uguna diidaan xaqiiqooyinka kuwaas oo caddaynaya dareenka, isla markaasna wuxuu bixiyaa mushaharkiisa lacag, iyo sida caddaynta dareenka. Sidaas darteed waxay u egtahay in aysan jirin wax khalad ah macallinka iskuulka ee helaya lacag ahaan sida lacag bixinta adeegyadiisa sida waafaqsan diyaaradda uu ku noolyahay oo wax dhigo; Hase yeeshee, maaha saxan cilmi-nafsi ama cilmi-yaqadiis si uu u dalbado inuu bogsiyo ama wax ka baro caddaynta dareennada, isla mar ahaantaasna qaato ama si sax ah u bixiso mushaharka sida uu u diidayo, laakiin taas oo uu waliba ku raaxaysto. Laakiin ha u maleynin inay khalad tahay macallinka dugsiyadu inuu lacag u helo adeegyadiisa. Xadgudubkaasi ma dhicin inuu u qalmo inuu bogsade noqdo si khalad ah, mana diidaan isaga oo ka masuul ah mas'uuliyadda falkiisa khaldan.